Rikoooo - ဒေါင်းလုတ်လုပ်-starter - Rikoooo
အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင် (သငျသညျ) မှတ်ပုံတင်ပြီးအသုံးပြုသူ (အခမဲ့) (ဂျမ်ဘို*)
75 KB / s ကို = 3h50 GB အထိနှုန်း
120 KB / s ကို = 2h25 GB အထိနှုန်း
/ s ကို≈ 4000 မိနှုန်း GB ကို4KB! **
တစ်ပြိုင်နက်တည်း downloads,2တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖိုင်များကို2တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖိုင်များကို 12 တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖိုင်များကို
ဘယ်အချိန်မှာငါဘာလုပ်ရမှန်းဘာမှဖြစ်ပျက်ဒေါင်းလုဒ် button ကို click? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
* အဘယ်ကြောင့်အချို့သောန့်အသတ်? စျေးအကြီးဆုံးသိသိသာသာကုန်ကျစရိတ်ကပါဝင်ပတ်သက်တထောင်တရာကျော်အသုံးပြုသူများ downloads, ပေး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bandwidth ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူများသည်ကုန်ကျစရိတ်ကြော်ငြာနှင့်ဖုံးလွှမ်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်တစ်ဦးဂျမ်ဘိုအစီအစဉ်ဖြင့်သင်တို့အခိုင်အမာအွန်လိုင်း Rikoooo.com ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကူညီနိုင်သည်။ အသင်းဝင်စစ်မှန်စွာရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်, သင်ဆဲလွတ်လပ်စွာန့်အသတ်အမြန်နှုန်းမှာအားလုံးဖိုင်တွေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
** ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းသင်၏ Internet connection ပေါ်တွင် မူတည်. ကွဲပြား